Buuhoodle: Ururada dhalinyarada oo loo qabtay tababar looga hadlayo dimuqraadiyeynta – Radio Daljir
May 10, 2019 8:42 g 0
Buuhoodle: daladda ururada dhalinyarada Puntland Youth Network (PYAN) oo gacan ka helaysa hay’ada Forum SYD ayaa magaalada Buuhoodle tababar ugu qabatay 40 xubnood oo ka socdey ururada dhalinyarada ee ka jira gobolka Cayn kuwaasoo qaatay tababar ku saabsan doorka dhalinyarada ee soo dhoweynta geedi socodka Dimuqraadiyeynta iyo ka qayb qaadashada hawlaha bulshada.
Xubnaha oo ka koobnaa 23 wiil iyo 17 gabdhood ayaa ka kala socdey ilaa 5 urur dhalinyaro oo ka jira deegaanka sida Ururka dhalinyarada ee Gargaar, ururka Ardayda, Ururka Akhriska iyo Qoraalka ee Awjaamac Cumar Ciise, Ururka Ardayda Jaamacada, Ururka dhalinyarada Handhis iyo qaar kale oo dhamaantood ka hawlgala gobolka.
Xubnaha dhalinyarada ah ee ka qayb qaatay intii uu socdey Aqoon iswaydaarsiga ayaa sheegay in ahmiyad weyn ay leedahay in dhalinyarada ay u sahlayso ka qayb qaadashada hogaaminta dalka hadii la helo nidaamka dimuqraadiyeynta.
“Marwalba dhalinyarada waxaa caqabad ku ah nidaamka doorashooyinka ee aan xorta ahayn, odayaashu waxay dhalinyarada ku han jebiyaan waxaad tahay hogaamiyihii beri maya dhalinyaradu waa in ay noqdaan hogaamiyaha maanta, runtii aqoon iswaydaarsiga noocan ah wuxuu keeni karaa in dhalinyaradu baraarugaan waxaana soo jeedin lahaa in tababaro inta ka badan la qabto PYAN na waan ka codsan lahaa inaysan tababarkan keliya nooga harin ee naloo badiyo”, ayuu yiri Jaamac Maxamed Xasan oo ka socdey naadiga Akhriska iyo Qoraalka ee Aw-Jaamac Cumar Ciise.
Maxamed Cabdixaafid Cali oo katirsan ururka dhalinyarada ee HANDHIS ayaa sheegay in caqabadaha dhalinyarada deegaanka haysataa ay ugu horayso la’aanta taageero iyo garab istaaga bulshada iyo dhinacyada kale.
“Hadii la helo tababaro joogta ah oo noocan ah waxaan hubaa in isbedel imaan karo”, ayuu yiri.
Tababarkan ayaa ahaa kii ugu horeeyey oo noociisa ah oo loo qabto ururada dhalinyarada ee kajira gobolka Cayn, masuuliyiinta daladda guud ee Puntland youth Network iyo daladda dhalinyarada Cayn ayaa dhankooda sheegay in tababaradu kuwo joogta ah noqon doonaan.
Qarax kadhacay iridka maxkamadda Bosaso